Mutemo unoverengwa uye unotsanangurirwa vanhu (1-12)
Mutambo Wematumba unochengetwa (13-18)
8 Vanhu vese vakabatana, vakaungana munzvimbo yaiungana vanhu yaiva pamberi peGedhi reMvura,+ uye vakaudza Ezra+ uyo aiva munyori* kuti auye nebhuku reMutemo waMozisi,+ wakanga warayirwa vaIsraeri naJehovha.+ 2 Saka pazuva rekutanga remwedzi wechi7,+ mupristi Ezra akauya neMutemo wacho pamberi peungano+ yevarume, vakadzi, nevese vaigona kuteerera vachinzwisisa. 3 Akauverenga zvinonzwika+ ari pamberi penzvimbo yaiungana vanhu yaiva pakatarisana neGedhi reMvura, kubva pakutsvuka kweutonga kusvika masikati, achiverengera varume, vakadzi nevese vaigona kunzwisisa; uye vanhu vakanyatsoteerera+ bhuku reMutemo. 4 Munyori Ezra aiva akamira panzvimbo yakakwirira yematanda yakanga yagadzirwa kuti ishandiswe ipapo; uye Matitiya, Shema, Anaya, Uriya, Hirikiya, naMaaseya vakanga vakamira pedyo naye kurudyi rwake, kuruboshwe rwake kuina Pedhaya, Mishaeri, Marikija,+ Hashumu, Hashi-bhadhana, Zekariya, naMeshuramu. 5 Ezra akavhura bhuku racho vanhu vese vachiona, nekuti aiva pakakwirira kupfuura vanhu vese. Panguva yaairivhura, vanhu vese vakasimuka. 6 Ezra akabva arumbidza Jehovha Mwari wechokwadi, Mukuru, vanhu vese vachibva vapindura kuti, “Ameni!* Ameni!”+ uye vakasimudza maoko avo. Vakabva vapfugama, vakadzikisa misoro yavo pamberi paJehovha. 7 Uye vaRevhi vanoti, Jeshua, Bhani, Sherebhiya,+ Jamini, Akubhu, Shabhetai, Hodhiya, Maaseya, Kerita, Azariya, Jozabhadhi,+ Hanani, naPeraya, vaitsanangurira vanhu Mutemo,+ vanhu vakangomira. 8 Vakaramba vachiverenga bhuku racho nenzwi riri pamusoro, kubva muMutemo waMwari wechokwadi, vachiutsanangura zvakajeka, vachiududzira; saka vakabatsira vanhu kunzwisisa zvaiverengwa zvacho.+ 9 Nehemiya, uyo aiva gavhuna* panguva iyoyo, nemupristi Ezra+ uyo aiva munyori, nevaRevhi avo vainge vachidzidzisa vanhu, vakati kuvanhu vese: “Zuva rino idzvene kuna Jehovha Mwari wenyu.+ Musachema kana kusvimha misodzi.” Nekuti vanhu vese vakanga vachichema pavainzwa mashoko eMutemo. 10 Akati kwavari: “Endai mudye zvinhu zvakanakisisa,* munwe zvinhu zvinotapira, mutumire zvekudya+ kune vaya vasina zvavakagadzira; nekuti zuva rino idzvene kunaShe wedu, uye musasuruvara, nekuti mufaro waJehovha ndiyo nhare yenyu.”* 11 Uye vaRevhi vainyaradza vanhu vese, vachiti: “Nyararai! nekuti zuva rino idzvene, uye musasuruvara.” 12 Saka vanhu vese vakaenda kunodya nekunwa nekutumira zvekudya uye kunofara chaizvo,+ nekuti vakanzwisisa mashoko avakanga vaudzwa.+ 13 Pazuva rechipiri vakuru vedzimba dzemadzibaba evanhu vese uye vapristi nevaRevhi, vakaunganira munyori Ezra kuti vawedzere kunzwisisa mashoko eMutemo wacho. 14 Vakabva vaona kuti muMutemo wainge warayirwa naJehovha achishandisa Mozisi mainge makanyorwa kuti vaIsraeri vaifanira kugara mumatumba panguva yemutambo mumwedzi wechi7,+ 15 uye kuti vaifanira kuzivisa+ uye kuudza vanhu mumaguta avo ese nemuJerusarema rese, vachiti: “Endai kumakomo muuye nemapazi ane mashizha akawanda emiti yemiorivhi, emipaini, emikute neemichindwe nemapazi ane mashizha akawanda emimwe miti kuti mugadzire matumba, maererano nezvakanyorwa.” 16 Saka vanhu vakabuda, vakauya nawo, kuti vagadzire matumba avo, mumwe nemumwe padenga reimba yake, nepazvivanze zvavo, nepazvivanze zveimba yaMwari wechokwadi,+ nepanzvimbo yaiungana vanhu yepaGedhi reMvura,+ nepanzvimbo yaiungana vanhu yepaGedhi raEfremu.+ 17 Saka vanhu vese veungano vakanga vadzoka kubva kuutapwa, vakagadzira matumba uye vakagara mumatumba acho, nekuti vaIsraeri vakanga vasina kuita saizvozvo kubvira pamazuva aJoshua+ mwanakomana waNuni kusvika pazuva iroro, zvekuti pakava nemufaro mukuru.+ 18 Uye bhuku reMutemo waMwari wechokwadi raiverengwa zvinonzwika zuva nezuva,+ kubva pazuva rekutanga kusvika pazuva rekupedzisira. Uye vakaita mutambo wacho kwemazuva 7, uye pazuva rechi8 pakava negungano dzvene, sezvaifanira kuitwa.+
^ Kana kuti “uyo aikopa Magwaro.”
^ Kana kuti “Ngazviitike!”
^ ChiHeb., “zvinhu zvine mafuta.”
^ Kana kuti “ndiwo simba renyu.”